cafezee hack — MYSTERY ZILLION
September 2009 edited October 2009 in Tech News
ဦးစွာ antivirus ကိုခဏပိတ်ပြီးစောစောက download ဆွဲထားတဲ့ rar ဖိုင်လေးကိုဖြေလိုက်ပါ။
ရလာတဲ့ ဖိုင်ကို data မထည့်တဲ့ memory stick ထဲသို့ copy ကူးထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် memory stick ကိုဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်လိုက်ပါ
autorun တက်လာပြီး box ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာ memory stick ပုံလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်။
အဲဒီ memory stick ပုံလေးကို select လုပ်ပြီး ok လုပ်လိုက်ပါ။
ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် memory stick ကိုဖွင့်ပြီး Dump ဆိုတာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
သင် memory stick ထိုးခဲ့တဲ့ စက်ရဲ့ နာမည်နဲ့ internet ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုသင်တွေရမှာပါ။
အဲဒီ software ဟာ memory stick ထဲမှာ data ထည့်ထားရင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
data ထည့်ထားတဲ့ memory stick ဆို၇င် batexe ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး
အထဲ့က software တစ်ခုစီကို run ခြင်းအားဖြင့်လည်း Computer ရဲ့ data တွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျား။
ကျွန်တော် တော့ မစမ်းရသေးဘူး။ ပြန်ပြောအုံးပါ။ .....
ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့...:D ထုံးစံ အတိုင်း thanks လေးကို :68::68:
USB thief ကို download လုပ်တဲ့ အချိန်မှာတင် antivirus software ကသတ်ပစ် ပါတယ်။ antivirus software ကိုပိတ်ပီး စမ်းတာ သူက စက်ထဲ မှာရှိတဲ့ password အားလုံးကို မပြပေးပါဘူး။ internet history တွေတော့ ပြတယ်။ ဒါကလည်း history မရှင်းထားတဲ့ စက်မှာမှ။ outlook မှာထည့်ထားတဲ့ password ကိုတောင်မထုတ်နိုင်ပါဘူး။
usb thief ကို download လုပ်တဲ့ အချိန်မှာတင် antivirus software ကသတ်ပစ် ပါတယ်။ :d antivirus software ကိုပိတ်ပီး စမ်းတာ သူက စက်ထဲ မှာရှိတဲ့ password အားလုံးကို မပြပေးပါဘူး။ internet history တွေတော့ ပြတယ်။ ဒါကလည်း history မရှင်းထားတဲ့ စက်မှာမှ။ outlook မှာထည့်ထားတဲ့ password ကိုတောင်မထုတ်နိုင်ပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခု လို ၀င်ရောက်ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးဘဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် စမ်းကြည့်လိုက်အုံးမယ်.....:d:dဒါပေမယ့် ဒီ MZ ကလူတွေ မသိသေးရင် သိအောင်လို့ပါ။ နည်းပညာမျှလိုက်တာပါ။
တခြားတော့မဟုတ်ပါ။ အသုံးတည့်တာ မတည့်တာ တော့ သုံးတဲ့ လူနဲ့ ဘဲ ဆိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ တော်တော်များများကို security အရနဲ့ virus တွေ ဝင်မှာ စိုးတဲ့အတွက် USB Storage device တွေဖြစ်တဲ့ memory stick, MP3/MP4 Player, Digital Camera, USB portable harddisk တွေကို အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ထားတယ်... ကျတော့် ရုံးမှာတော့ CMOS ထဲကနေ USB ကို disable လုပ်ထားတဲ့အပြင် USB port တွေကိုပါ physical အရပါ ပိတ်ထားရတယ်... အခုတော့ Windows XP မှာ USB storage device တွေကိုပဲ အသုံးပြုခွင့် ပိတ်ချင်တယ် ဆိုရင် ဘယ်လို ပိတ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ နည်းကို google ကျေးဇူးနဲ့ ရှာတွေ့ပြီ...
အခုရေးမယ့် အဆင့်တွေကတော့ USB storage device တစ်ခုခု အနည်းဆုံး ၁-ခါ တစ်ခါ တပ်ဆင် အသုံးပြုဖူးတဲ့ Windows XP သုံး ကွန်ပျူတာတွေ အတွက်ပါ... မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ user account ဟာ administrator အဆင့်တော့ ရှိစရာလိုပါတယ်...
1. ပထမအဆင့်အနေနဲ့ Start ကို click လုပ်ပြီး Run ကို ရွေးပါ... (Windows Key + R ကို နှိပ်ရင်လည်း ရပါတယ်...)
2. ပေါ်လာတဲ့ Open ရဲ့ဘေးမှာ ရှိတဲ့ text box ထဲမှာ regedit လို့ရိုက်ထည့်ပြီး OK ကို ကလစ်လုပ်ပါ...
Registry Editor ပေါ်လာပြီဆိုရင်...
3. HKEY_LOCAL_MACHINE В» SYSTEM В» CurrentControlSet В» Services В» UsbStor
4. ညာဘက် pane ထဲက Start ကို double click ခေါက်ပါ...
5. Value Data အောက်ကပ်ရပ်မှာ ရှိတဲ့ text box ထဲမှာ4လို့ ပြင်ရိုက်ထည့်ပါ... Hexadecimal ကို မရွေးထားရင် ရွေးပေးပါ... ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါ...
(USB Storage device တွေ အသုံးပြုခွင့် ပြန်ပေးချင်တယ် ဆိုရင်တော့3လို့ရိုက်ထည့် ပေးရမှာပါ...)
6. Registy Editor ထဲမှ ထွက်ပါ...
အကိုပြောသလို ဖိုင်း ကို stick ထဲထည့်လိုက်တော့ ..
virus ဆိုပြီးတော့ .... kasper ကပြတယ်
ဒါနဲ့ အဲဒီကောင်ကို ခနဖြုတ်ထားလိုက်တယ် strick ကိုဖြုတ်တယ် ..နောက်ပြီးတော့ .... ပြန်တတ်တယ် autorun တတ်လာတယ် .... အဲဒီမှာအကိုပြောတဲ့memory stick ပုံလေး ဆိုတာမတွေ့ဘူး ..ဖြစ်နေတယ် အဲဒါဘာလိုနေလဲပြောပြပါဦး ။ ... စမ်းကြည့်ချင်သေးလို့ပါ။ :77::77::77:
၁။ ဒီလိုမျိုး သူများတွေလည်း စမ်းလို့ရအောင် တင်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၂။ ဒီ MZ မှာ ဒီလို Post မျိုးတင်မယ်ဆိုရင် သတိထားပါ။ ဆရာလိုလို သဘာလိုလိုလုပ်ပြီး ဒါက မကောင်းဘူး ။။ သူခိုးလမ်းပြလုပ်တာ ဘာညာဆိုပြီး ရန်စောင်တာတွေနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်။
၃။ ပြီးတော့ အဲဒီလို ပြောတဲ့ သူတွေလည်း ဒိုင်လျှိုလေးနဲ့ လုပ်တာပါပဲ။ တစ်ခုပဲ ကွာတယ် သူတို့ခမြာ Hacking Tool တွေကို Download လုပ်ချင်တာတောင် ပေါ်တင်မလုပ်ရဲဘူး ။ ခိုးကြောင်ခိုး၀ှက်လုပ်ရတယ်။ LOL ;D
၄။ ဒီ USB Thief ဟာ Nir Soft က Password Recovery Tools တွေကိုသုံးထားတာကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒီ Tool တွေက ခေတ်မမီတော့ပါဘူး။ လုံခြုံရေးကောင်းတဲ့စက်တွေဆိုရင် Run ဖို့မပြောနဲ့ RAR ကိုတောင်ဖြည်လို့မရပါဘူး။ ဒီအကြောင်းကို ဘဘကြီး brb ရေးထားပါတယ်။
အလားတူ .. usb အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ printer တို့ scanner , hub တို့ ကို ထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ပါ ။ အခုလို idea ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဘဲ။ ကျွန်တော် လည်း နည်းပညာမျှရုံသက်သက်ပါ။ .....:)
ဒါက သူများsite မှာရေးထားတာကို ပြန်တင်ပြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ site အတွက် အထောက်အကူဖြစ်အောင်ပါ။ ရိုးရိုးသားသား၀န်ခံတာနော် ကူးချတာလို့။
Cafezee ကို Hack လုပ်ကြမယ်.
အရင်ဆုံး C:\_windows\_system32 ထဲက client.pra နဲ့ client2.pra ဆိုတဲ့ file နှစ် file ကို copy ကူးလိုက်ပါ... ပြီးရင်အဲဒီ file နှစ် file ကို msaccess (Microsoft Access) နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ....တစ်ဖိုင်ချင်းကိုဖွင့်ပါ...
password လာတောင်းလိမ့်မယ်...[vanarp117] လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ..(လေးထောင့်ကွင်းတွေမပါဘူးနော်).....
ပွင့်သွားရင်...control ထဲကို၀င်ပြီးတော့ Admin Password ကို ဖျက်လိုက်ပါ...သူက encrypt လုပ်ထားတယ်...
ပြီးရင် taskmgr (Windows Task Manager) ကိုဖွင့်ပြီး Explorer .exe ကို End Process လုပ်ပေးပါ...
ပြီးရင် အဲဒီပြင်ထားတဲ့ ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ကို copy ကူးပြီးတော့ သူ့ရဲ့မူရင်း folder ထဲကိုပြန်ထည့်ပေးပါ...
"အထဲမှာနာမည်တူဖိုင်ရှိနေပါတယ်..အဲဒီဖိုင်ပေါ်ကို overwrite လုပ်မလား"လို့မေးလိမ့်မယ်...ဖိုင်နှစ်ဖိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် yes to all လုပ်ပေးလိုက်ပါ...ပြီးရင် Cafezee ကိုပြန် run ပေးပါ...
သူ့ရဲ့ Admin Option ထဲကို၀င်လိုက်ရင် password လာတောင်းလိမ့်မယ်..ကျွန်တော်တို့ password ကိုဖျက်ထားခဲ့တဲ့အတွက် ဘာမှမရိုက်ပဲ OK လုပ်ပေးလိုက်ပါ...သူ့ရဲ့ Admin ထဲ၀င်သွးပါပြီ...
Admin Option ထဲမှာ ခင်ဗျားရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ Adjustment ဆိုတာကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါ...အဲဒီထဲမှာ (သူ့ရဲ့ Label တော့မေ့သွားပြီ) Text Box2ခုရှိတယ်...အောက်က Text Box က comment ..အပေါ်က Text Box မှာ ခင်ဗျားလျှော့ချင်တာကိုလျှော့ပါ..
(ပိုက်ဆံနဲ့သုံးတာဆိုရင် ပိုက်ဆံကိုလျှော့ပါ...1000 ရှိပြီဆိုရင် 1000 ထိပဲရမယ်နော်..Negative လက်မခံပါဘူး....)
(Member ဆိုရင်တော့ သုံးထားတဲ့ နာရီထက်ပိုပြီးလျှော့လို့မရပါဘူး..1း30 သုံးထားတယ်ဆိုရင် မိနစ်ကိုးဆယ်ထက်ပိုပြီးလျှော့လို့မရပါဘူး)
ကိုုယ်လျှော့ချင်တာလျှော့ပြီးရင်တော့ ညာဘက်ထောင့်ဆုံးမှာ close session ကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါ...
(လျှော့ပြီးတော့ continue ကို click လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာမှမထူးဘူးနော်)
Cafezee ကို End Task လုပ်တာရယ်...ပြင်ပြီးတဲ့ဖိုင်ကို C:\_windows\_system32\_ ထဲကိုပြန်ထည့်တာရယ်...
Cafezee ကို ပြန် Run တာရယ်ကို5စက္ကန့်လောက်အတွင်း လုပ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်...Cafezee က Server ကို
5 စက္ကန့်လောက်ကို တစ်ကြိမ် Capture ပြန်ပို့ပါတယ်...(ဒါကတော့ Server ကပေးတဲ့ security နဲ့ဆိုင်ပါတယ်)
Access Password ဘယ်ကရလဲဆိုတော့ Password Recovery Kit နဲ့ကြည့်တာပါ...
အဲဒီထဲမှာ Access Password Recovery ဆိုတာပါပါတယ်.....
အကယ်၍ taskmgr ပိတ်ထားခဲ့ရင် Process Explorer နဲ့ End Process လုပ်ပါ..
Process Explorer download Link ကဒီမှာပါ...
Process Explorer သုံးမယ်ဆိုရင် End Process မဟုတ်ပါဘူး..Kill Process ပါ..
End Process မှာ explorer ချင်းမမှားပါစေနဲ့...
windows explorer က [explorer.exe] ပါ
Cafezee က [Explorer .exe] ပါ
အခုမှစလုပ်သူများ အခက်အခဲရှိရင် Taskmgr ထဲက Application ထဲမှာ Explorer ကို Right Click ထောက်ပြီး
Goto Process ကို click လုပ်ပါ..ပြီးရင် သူ Select လုပ်ပေးထားတာကိုပဲ End Process လုပ်ပေးလိုက်ပါ..
ကျွန်တော်၀န်ခံတယ်နော် administrator ကဖျက်မချရင် တွေ့ရမှာပါ အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ
CyberCafe Pro ဆိုရင်ရောဟင်............:71::71::71:
5 ကတော့cookies viewer ဆိုတဲ့ဆော ့၀ဲလ် install လုပ်ပြီး run လိုက်တာ နဲ ့
တစ်နေကုန်သုံး bill မတတ်ပါကြောင်းး )
Cookie-Viewer နဲ ့ပတ်သတ်တာလေးတွေ ဒီမှာ သွားကြည် ့ပါခင်ဗျ။
ဟွန့် ငါဆိုင်မှာအေတာတွေလုံး၀မတင်တော့ဘူ :P
cafezee နဲcybercafe pro နဲလုံး၀မသုံးတော့ဘူ
အစ်ကို ဆိုင်က ဘယ်နားမှာ လဲဟင်...။ ကျွန်တော် လမ်းကြုံရင် လာခဲ့မယ်:d:p
ငါcafezee သုံးလိုမရတော့ဘူ:14: :P
အစ်ကိုကလည်း စိတ်ချိုးရဘူးလေ:68::68: အစ်ကို ဆိုင်မှာ ကျွန်တော် အင်တာနက်လာသုံးပေမယ်လေ။ အစ်ကို လည်း ပိုက်ဆံရတာပေါ့။ ဟီး...ဟီး....:d:p
ကိုရေလိုအေး ကျွန်တော်လဲလာသုံးလှည့်မယ်နော်။ ဘာတဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် ၃လိုင်းစံနစ် နဲ့ဆိုလားသိဘူး။ လာခဲ့မယ်နော် ကော်ကော်လဲတိုက်မယ်မဟုတ်လား။
နောက်ဆုံးတော့လည်း မန်ညူရယ် စာအုပ်နဲ့ ဘောလ်ပန်ကို စွန့်လို့မရကြောင်း ကောင်းကောင်းသိသွားတာဘဲလေ....
အသစ်တွေဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အဟောင်းကိုတော့ တလည်လည် တဲ့ :d
လန်းတယ်အကို ညီတို ့ဆိုင်မှာလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်အသုံး၀င်ပါတယ် တချို ့တက်တဲ့လူတွေလုပ်သွားရင် ညီတို ့အတွက် ပြန်ဖြီးလို ့ရတာပေါ့
cafesuite နဲ့handy cafe ကတော ့စမ်းသပ်တုံး..
မကြာခင် လာမည် မျှော်...........
အထင်မကြီး နဲ ့နော ့်. ကိုယ် ့ဆိုင် မှာ တင် ကို ယ့်ဖာသာ ကိုယ် အင်စတော လုပ်ပြီး
လျှောက်ကလိတာ .. ဟီးး ဟက်တာ .. ခရက်တာ ဘာမှ မသိပါကြောင်း...
မကြာခင် လာမည် မျှော်........... :d
လျှောက်ကလိတာ .. ဟီးး ဟက်တာ .. ခရက်တာ ဘာမှ မသိပါကြောင်း... :d
ကောင်းပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။ :6:အစ်ကို အဆင်ပြေခဲ့ရင်လည်း မျှပါအုံး....:77::77:
handy cafe က kaspersky နဲ့ညိလွန်းလို့ စိတ်ညစ်တာသုံး၇တာတော့မဆိုဘူး။ ဖိုင် 3ဖိုင် run နေပြီး သူ့ကြော်ငြာpage ကြီးတွေပြပြနေတာတော့ဆိုးသဗျာ။အဲဒါ့ကြောင့်
cafezee ပဲပြန်သုံးနေ၇တယ် ခုတော့ ms access လဲဖြုတ်ထားလိုက်ပြီ
portable တွေလဲပိတ်ဦးမယ် ဟွန့်:103::103::103:
I'm not sure what you mean by know how to hack. What exactly are you wanting to do with the software (just for the fun of it)? If you're just wantingaversion that's fixed, then read on:
A very powerful, yet very affordable Internet Cafe Software
- Specifyatime duration to restrictaprepaid member oraprepaid code account. The account can login only in this specified time range.
- Automatically charge for the printouts.
- Control the printouts given by the users, Allow/Cancelaprint job.
- Capture all the websites or web pages visited byacustomer.
- Allow and ban applications by their path, window title.
- Allow and ban websites by their site address, and website title.
- Providing the Last login information for prepaid member and prepaid code accounts.
- Accept the customer details before startingapost-paid session.
- Exit the selected Cafezee client(s) from the server.
- Get selected reports, automatically emailed to your email id.
- New reports and more configuration options.
Different staff members can be given different access rights with regards to the operation of Cafezee. For instance, some may be givenaright to unlock the server and work on it, some may be givenaright to modify client security settings etc.
- Bills can be printed showing the pc usage amount and the amount from other services afteracustomer session.
- Extensive reporting Transactions onaparticular day
- Daily collections overaperiod
- Monthly collections overaperiod
- List of prepaid members
- Transactions ofaprepaid member
- Adjustments/Discounts given
- Printer usage summary
- Internet connection graph
- Server ON/OFF graph
- Option to display the Cafezee server and the client program in the system tray.
- Option to stop the carrying forward of the Validity period for prepaid accounts.
- Option to avoid renewals from the client program for the prepaid users.
thankz about this
client.pra နဲ့ client .pra2not found